Ku qor Qormadeyda 'Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Nooca My Dissertation ee ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Nooca My Dissertation waa feyl dukumiinti elektiroonig ah oo uu diyaariyey ardayga PhD si loogu caawiyo ardaydiisa inay qabtaan shaqada koorsada looga baahan yahay shahaadadooda PhD. Markaad tahay ardayga PhD, waa inaad ku qortaa shahaadadaada, inta badan mowduuc aad dooratay oo aad u abaabusho cilmi-baaristaada si loogu gudbiyo guddiga falanqaynta. Ujeedada ugu weyn ee dukumiintigan ayaa ah in la qabto dhamaan shaqada koorsada ee looga baahan yahay mid si loo siiyo shahaadada. Sidaa darteed waa muhiim in la doorto qaabka ugu habboon ee tan. Qoraalka PhD waxaa loo qori karaa siyaabo badan, laakiin maadaama kani yahay dukumiinti cilmiyaysan, waxay u baahan doontaa adeegsiga qaar ka mid ah heshiisyada gaarka ah.
Mid ka mid ah heshiisyadan ayaa ah adeegsiga ereyga `` amar '' cinwaanka dukumintiga. Waxaad u baahan doontaa inaad wax u qorto si ay ugu habboon tahay heshiisyada caadiga ah ee cinwaanada buugaagta, tusaale nooca Newbery iyo Latour. Qaybta koowaad ee qoraalku waa inuu noqdaa bayaan cad oo kooban oo ujeedka laga leeyahay qoraalka. Qaybta labaad ee qaybtani waa inay la xiriirtaa ujeedadaas inta laga xaqiijin karo ilo kale oo ay taageereyso doodahaaga. Tani waxay loola jeedaa nuxurka qaybta saddexaad ee qoraalka.
Qoraalku wuxuu kaloo adeegsan karaa waxyaabo loo gudbiyey dukumintiga oo dhan si loogu taageero saxnaanshihiisa ama abaabulkiisa. Qoraalku ma aha inuu ku celiyo shaqadii horey loogu qabtay suugaanta. Sidoo kale waa inaadan nuqul ka sameysan xogtaada maxaa yeelay tan waxaa loo arkaa inay tahay xatooyo. Ardayga PhD wuxuu si caadi ah u isticmaali doonaa shaxanka daabacaadda ee uu keenay la-taliyihiisa, ama wuxuu dooran karaa inuu beddelo shaxanka si uu ugu habboonaado baahidiisa iyo baahiyaha cilmi-baarista ee qoraalkiisa.
Adeegyada adeegga gudbinta qoraalka ayaa loo heli karaa qof kasta oo doonaya inuu isticmaalo qaabkan. Haddii aad tahay dhakhtar, garyaqaan ama xitaa arday, waad isticmaali kartaa adeegga gudbinta shahaadada si aad u abuurto oo aad u ururiso shahaadadaada. Ma jiro barnaamij gaar ah oo la soo dejisto.
Waxa kaliya ee loo baahan yahay si looga faa'iideysto adeegyada adeegga gudbinta qoraalka ayaa ah in la buuxiyo macluumaadka loo baahan yahay ka dibna lagu soo gudbiyo khadka tooska ah. Waxaad heli doontaa ogeysiiska soo gudbintaada waxaana laga yaabaa inaad hesho caddeyn ah soo gudbinta emayl ahaan. Haddii aad u baahato macluumaad dheeri ah, shirkadaha badankood waxay ku siin doonaan xiriirin ay ku weydiistaan ​​tan. Inta badan adeegyada gudbinta qoraalka ayaa kuu soo diri doona waqtiga kama dambaysta ah ee goorta aad heli doontid buugaag dhameystiran. Qaarkood sidoo kale waxay ku deeqi doonaan adeegyo dheeri ah, sida akhrinta iyo ka faallaynta qoraalkaaga.
Adeegga gudbinta qoraalka ayaa ah hab fudud oo lagu daabaco qoraalkaaga. Waqti iyo lacag ayey u keydisaa ardayda maadaama aysan u baahnayn inay qoraalada oo dhan sameeyaan. Buug-yaraha ayaa lagu qoraa keligiis oo markaa borofisarku maahan inuu ku lug yeesho habka qorista. Tani waxay u sahlaysaa ardayda inay dhammaystiraan qalin-jabinta maaddaama aan loo baahnayn in qof si shakhsi ah loo wareysto, ama loo qoro qoraalka ugu horreeya ee laga soo bilaabay.
Waxay u muuqan kartaa wax fudud, laakiin sugidda adeegga gudbinta buugaagta had iyo jeer ma aha sidaas fudud. Ardaydu waxay u baahan yihiin inay baaraan shirkadda ay adeegsanayaan. Mid xun ayaa dhaawici kara shaqadaada. Hubso in shirkaddu leedahay sumcad wanaagsan oo ay sameyso baaritaanka taariikhda. Sumcad xumo ayaa ardayda ku waayi karta shaqadooda. Sidoo kale, hubi inay runti bixiyaan lacagaha dhoofinta iyo maaraynta.
Nidaamka gudbinta qoraalka ayaa ah qayb aad u daal badan oo nidaamka PhD ah. Ardaydu waxay u baahan yihiin inay baaraan shirkadda ay adeegsan doonaan, ka dibna ay si taxaddar leh u abuuraan soo-jeedinta ay u baahan yihiin inay ku soo lifaajiyaan qoraalkooda. Hal qalad oo waxay noqon kartaa dhamaadka xirfada ardayga PhD. Hubso in shirkaddu dhab ahaantii tahay mid sharci ah, oo sumcad ku leh bixinta adeegga macaamiisha. Haddii ardaygu wax su'aalo ah qabo, waxaa jira shirar badan oo khadka tooska ah ah si looga caawiyo su'aalahooda.